ကောင်လေးတွေက သူ့ကောင်မလေးကို ချစ်လွန်းအားကြီးရင် ပြတဲ့ အမူအရာတွေက ... - Chelmo News Portal
Home›Exclusive›ကောင်လေးတွေက သူ့ကောင်မလေးကို ချစ်လွန်းအားကြီးရင် ပြတဲ့ အမူအရာတွေက …
မိန်းကလေးတွေက ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်လားဆိုတာကိုစမ်းကြည့်ချင်တယ်မဟုတ်လား။ဒါပင်မယ့် မိန်းကလေးအနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုချစ်လားလို့ မေးရမှာလည်း ခက်သားနော်။ ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ရင်သိနိုင်မလဲ။သူ့ရဲ့အမူအရာတွေက သက်သေပြမှာပါ။ ကဲ… ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
၀၁. ကိုယ့်ကိုအကူအညီတောင်းတဲ့ အမူအရာ …
ယောင်္ကျားလေးတွေက မိန်းကလေးဘက်ကကြည့်ရင် အားကိုးစရာ၊ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးတာက သူတို့ရဲ့တာဝန်လို့ ထင်ကြလိမ့်မယ်။ဒါပင်မယ့်၊ သူတကယ်ကို ချစ်တဲ့မိန်းကလေးအပေါ်မှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကို ထုတ်ပြရမှာ မကြောက်ကြပါ။ ဒါကြောင့် တကယ့်ကို ရှင်းမပြတတ်အောင်
အခက်ကြုံနေတဲ့အချိန်မှာ မိန်းကလေးအပေါ်မှာ အကူအညီအရင်လာတောင်းရင်တော့ သူက ကိုယ့်ကို တကယ်ကို ချစ်နေတာကို သက်သေပြနေတာပါ။
နောက်တခု … ကိုယ့်ကို သူရဲ့ခံစားချက်တွေကိုလာပြီး တိုင်ပင်နေပြီဆိုရင်တော့ မမှားဘူးပါ့နော်။
၀၂. မပြောမဆိုပဲ အိမ်ကို ရောက်ချလာတယ် …
တကယ်ဆိုရင် ဘယ်သူ့အိမ်ကိုသွားသွား မသွားခင်တော့ လာမယ့်အကြောင်းကို ကြိုပြောကြတယ် မဟုတ်လား။ မပြောမဆိုပဲ၊ စိတ်ထဲမထိန်းနိုင်ပဲ၊ အိမ်ကိုရောက်ချလာမယ်ဆိုရင် သူက ကိုယ့်ကို အရမ်းကို ချစ်နေတာပါ။ ခဏခဏ အိမ်ကို လာရတာကိုက သူ့အတွက် စိတ်ချမ်းမြေ့၊ စိတ်သက်သာစေနေတာပါ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဘေးမှာ အတူတူရှိနေတာက စိတ်ချမ်းသာစေတာပါ။
၀၃. Anniversary တွေကို အထူးသတိရပြီး Suprise တွေလုပ်ပေးတယ် …
မိန်းကလေးတွေက Anniversary တွေကို အမှတ်ရနေပင်မယ့်လည်း ယောင်္ကျားလေးတွေက မေ့နေတတ်တယ်နော်။ ဒါပင်မယ့် Anniversary တွေကို မမေ့မပျောက်၊ Suprise လုပ်ပေးတဲ့သူဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်လို့ပဲဆိုတာ သိထားဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ ၂ယောက်ပေါင်းပြီး Anniversary အတွက် ကြိုတင်တွေးထားကြမယ်၊ တဖက်ကလည်း Suprise လုပ်ပေးမယ့်စိတ်လေးရှိနေပြီဆိုရင် မလွဲတော့ဘူး။ အရမ်းကို ချစ်လို့ …
၀၄. သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပြီ …
သူငယ်ချင်း၊မိတ်ဆွေတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပြီဆိုတာ့ အနာဂတ်အတွက် ကြိုတင်တွေးနေပြီဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နော်။ သူရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲကို အတည်တကျ သတ်သတ်မှတ်မှတ် မိတ်ဆက်ပေးနေတာက ကိုယ်က သူ့အတွက် အရေးကြီးနေပြီဆိုတဲ့ သဘောပေါ့နော်။
ဘယ်အချက်လေးတွေက ကိုယ်နဲ့တိုက်ဆိုင်မှုရှိနေပြီလဲ။ တိုက်စစ်ကြည့်လိုက်နော့။
Sai Sai ရဲ့ သီချင်းသစ်မှာ တွဲဖက်ပါဝင်သီဆိုမယ့် 2NE1 ရဲ့ Park Bom
ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်မှာ ထပ်ဆုံကြဦးမယ့် Kem Hussawee နဲ့ Mookda Narinrak
Second generation တွေ အကြားမှာ ပရိသတ်တွေအချစ်ပိုနေရတဲ့ 2PM’s Lee Junho